Ciidamada Amniga Puntland ee PSF ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaano dhowr ah oo ka tirsan buuraha gobolka Bari halkaas oo xubno iyo horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish ay dhowr jeer ka geysteen weeraro sida ay sheegeen saraakiisha. qayb ka ah maamulkaas.
Qoraal la soo dhigay barta PSF ayaa lagu sheegay in 2-da ilaa 3-da Janaayo 2021, howlgalka uu fashiliyay weeraro qorshaysan oo Al-Shabaab ay ku soo qaadi lahaayeen ciidamada ku sugan Al Miskaat, Timirshe, Tuurmasaale, Il, Camayra & Legunle.
Meelo dhowr ah, saraakiisha amniga Puntland waxay sheegeen in xubno ka tirsan kooxda Daacish ay isu soo uruurinayaan inay weeraraan askartooda, laakiin ay adeegsanayaan macluumaad ay heleen si looga hortago.
Saraakiisha amaanka ee Puntland ayaa sheegay in dadka deegaanka iyo reer guuraaga oo u badan xoolo dhaqato ay kooxda Daacish ku cadaadineyso inay diidaan inay u dhawaadaan saldhigyadooda sida ay hadalka u dhigeen.
“Dadka deegaanka iyo xoolo dhaqatada ku nool deegaanka oo ay qatar ku jirto kooxda Daacish, waxay uga mahadceliyeen ciidanka PSF howlgalada ka dhanka ah Daacish ee ay ka wadaan deegaanka si dadka deegaanka ay ugu noolaadaan amni iyo xorriyad”. War qoraal ah oo la soo dhigay barta Ciidamada Amniga Puntland ayaa lagu yiri.
Ciidamada amaanka ee maamulka Puntland ayaa dhowr jeer weeraro ku qaaday fariisimo ay ku leeyihiin dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari, waxayna fuliyeen howlgalo ka dhan ah Al-Shabaab iyo Daacish oo saldhigyo ku leh deegaanadaasi.
“Haddii garoonku nabdoon yahay, maxaa diidaya